Ny efijery an'ny Samsung Galaxy Note 20 dia tsy hiolaka | Androidsis
Ny efijery an'ny Samsung Galaxy Note 20 dia tsy hiolaka
Tsy dia misy mahalala ny antsipiriany rehetra momba ny sainan'ny fianakavian'ireo phablets an'ny mpamokatra Koreana. Tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy ny fampisehoana ny Samsung Galaxy Note 20 sy Note 20+, fa izao dia ho fantatsika hoe hanao ahoana ity fitaovana ity.
Saingy, volana vitsivitsy aorian'ny fampisehoana azy dia mbola misy ny famoahana hahafantarana bebe kokoa ny toetran'ity terminal efa nandrasana hatry ny ela ity. Ny farany? ny Efijery Samsung Galaxy Note 20 tsy hanana ny famolavolana fantatry ny maodely teo aloha intsony izy io.
Ny efijery Samsung Galaxy Note 20 dia mamoaka famolavolana miolakolaka
Ary io dia tamin'ny alàlan'ny mpiara-miasa amin'ny SamMobile, iray amin'ireo loharano azo antoka indrindra mifandraika amin'ny tontolon'ny Samsung, dia nanamafy izany ny efijery an'ny Samsung Galaxy Note 20 dia handao izany famolavolana mampiavaka azy izany izay natomboka tamin'ny Samsung Galaxy Note Edge.
Eny, ny takelaka miolaka dia singa iray tsy mampitovy an'i Samsung sy ny sisa amin'ireo mpanamboatra, fa nanjary singa mahazatra hatrany izy io, ary maninona no lavina izy io, manintona be amin'ny sehatra hita maso fa tsy amin'ny sehatra azo ampiharina. Ary ankehitriny isika dia afaka manamarina fa Samsung dia hanao fanovana lehibe amin'ny fijerin'ny sainam-pirenena manaraka.
Ny olana amin'ireo takelaka miolaka dia tena kanto izy ireo, saingy mampihena ny toerana azo ampiasain'ny finday, indrindra rehefa miloka amin'ny S Pen, Hatramin'ny nanatonantsika ny sisiny dia very ny fitoniana. Ary toa nanamarika an'ity olana ity ihany ny mpanamboatra ary hofoanana ny fijery miolakolaka amin'ny efijery Samsung Galaxy Note 20.
Tsy maintsy miandry isika hatramin'ny 20 aogositra, ny daty andrasana amin'ny mpanamboatra hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy Note 20, saingy toa fihetsika mirindra tokoa izany mba hampitomboana ny fiasan'ny fitaovany voalohany. Hitranga ve izany amin'ny maodely Plus? Amin'izao fotoana izao dia mistery tanteraka izy io, saingy azo inoana fa ny elanelan'ny Note 20 manontolo dia mivoaka miaraka amin'ny tontonana miolaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny efijery an'ny Samsung Galaxy Note 20 dia tsy hiolaka
Ahoana ny fametrahana Android 11 Beta soa aman-tsara ao amin'ny Google Pixel
Fiaraha-mientan'ny feo manaitra amin'ny Android 11 amin'ity horonantsary ity: ankehitriny "mahatakatra" ny tontolon'ny efijery sy ny atiny